Uganda Vanosvika Vatasvi Zvino Vakasununguka Kuenderera Mushure mekuedzwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Uganda Breaking News » Uganda Vanosvika Vatasvi Zvino Vakasununguka Kuenderera Mushure mekuedzwa
nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Uganda Breaking News
Uganda vanosvika vapfuuri
Kutevera kudzvinyirirwa nevafambi uye nesocial media bashing, Ministry of Health yeUganda yakamanikidzwa kumedza imwe pie yakazvininipisa uye kukotama kumanikidzwa nevafambisi vevashanyi uye veruzhinji vanofamba uye kubvumidza vafambi vanosvika kuti vaenderere kwavanoenda mushure mekumanikidzwa kuongororwa kweCCIDID-19 PCR pa. kusvika.
Izvi zvakaitika mushure mekunge murairo wekutanga unosungirwa kuti vafambi vamirire mibairo yavo kana vasvika panhandare yendege wasangana nenjodzi.
Vafambi vakati wandei vakagovana nhanho yekutambudzika kwavo paWhatsApp, twitter, facebook, uye mamwe masocial media mapuratifomu mushure mekumirira kwemaawa panhandare yendege.
Zvaive zvinonyadzisa kune indasitiri iri kunetseka kuvaka patsva mushure memakore anenge maviri.
Kuchengetedza chiso, kechipiri mukati meisingasviki vhiki, rairo yakapihwa yakamiririra Hurumende yeUganda. Iyi yechipiri, inotaurwa seS23/21 COVID-19 Hutano matanho eEntebbe International Airport kubva kuCivil Aviation Authority Aeronautical Information Office muEntebbe, inotsiva iyo yapfuura rairo yeSUP 22/21. Shanduko iyi inotanga kushanda nhasi musi wa5 Mbudzi.
Gwaro idzva rinoti:
1. Vese vafambi vanosvika paEntebbe International Airport, zvisinei nenyika yavanobva kana nhomba, vachaongororwa COVID-19.
2. Kuti zvive nyore, vafambi vese vanenge vachisvika paEntebbe International Airport vachatorwa masampuli avo eCOVID-19 vobvumidzwa kuenda kudzimba dzavo kana kumahotera kuti vazviparadzanise vega kudzamara vawana zvavanenge vawana.
3. Mhedzisiro dzebvunzo dzichatumirwa kumafoni / maemail avo.
4. Vanoregererwa chete ndeiyi:
- Vana vari pasi pemakore matanhatu.
- Vashandi vendege vane humbowo hwekudzivirira kwakazara kweCCIDID-19.
5. Vapfuuri vanenge vaonekwa vaine hutachiwana vanozoteverwa neboka reMinistry of Health Surveillance.
6. Mabatirwo anoitwa vatyairi vari mu(5) pamusoro achatevera mirau yekurapa yeBazi rezvehutano COVID-19.
7. Kana mutakuri akaonekwa asvika aine zviratidzo zvinoratidza utachiona hweCOVID-19, anoiswa ega oendeswa kunzvimbo inorapirwa nehurumende.
8. Kuti zvifambire zvakanaka paEntebbe International Airport, vese vanopinda mukati vanosungirwa kuti:
- Zadzisa online Health Surveillance fomu 24 maawa asati asvika.
- bhadhara US$30 online 24 maawa asati asvika.
9. Vese vanenge vachisvika vanosungirwa kuti vauye kuAirport Port Health, COVID-19 negative PCR test certificate yebvunzo yakatorwa mukati memaawa 72 kubva panguva yekutorwa kwesampuli.
10. Vese vafambi vari kuenda vanosungirwa kuti vauye kuAirport Port Health, COVID-19 negative PCR chitupa chebvunzo yakatorwa mukati memaawa makumi manomwe nemaviri kubva panguva yekutorwa kwesample kusvika kuboarding. Ivo vanozotevedzera zvinodiwa zvehutano zvekufamba kwenyika yavanoenda.
11. Vatasvi vanosvika panguva yakatarwa, uye/kana kuti vanobva kumatunhu ari mhiri kweKampala vaine tikiti rendege uye nzvimbo dzekukwira, vachabvumidzwa kuenda kumahotera kana/kana kwavanogara.
12. Vatasvi vanenge vasimuka nenguva yekusvika pamba, uye/kana kubva kumatunhu ari mhiri kweKampala vaine tikiti rendege rinoshanda, vachabvumidzwa kuenda kunhandare yendege kwavachange vachiratidza tikiti kuvakuru seumboo hwekuenda kunhandare yendege.
13. Vatyairi vanofanira kuva neuchapupu hwokuti vabva kunhandare yendege (zvakadai setiketi rekupaka panhandare yendege kana kuti tikiti repasessanger) kuzoburusa kana kusimudza vafambi.
14. Kutakurwa nemhepo kwezvisaririra zvevanhu kupinda munyika kunobvumidzwa kana zvinotevera zvazadzikiswa:
– Medical Chitupa Chakonzera rufu.
-Post-mortem report kana Comprehensive Medical Report kubva kuna chiremba/hutano nzvimbo.
- Chitupa chekuomesa (kusanganisira chitupa chekumisa rufu nekuda kweCOVID-19).
- Kopi yepasipoti/chitupa chemufi. (Pasipoti yepakutanga/gwaro rekufambisa/gwaro rechiziviso rinofanira kuendeswa kuvakuru vezvekubuda kwevanhu munyika).
-Kupinza rezinesi / mvumo yekunze kubva kuna Director General wehutano Services.
– Packaging yakakodzera – yakaputirwa mubhegi remuviri usingapindi mvura yozoiswa mubhokisi rakaiswa zinc nebhokisi rekunze resimbi kana remapuranga.
- Gwaro richasimbiswa nehutano hwechiteshi, uye bhokisi kana rasvika richasvibiswa nehutano hwechiteshi.
- Kuvigwa kwemitumbi yevakabatwa neCCIDID-19 kuchaitwa zvichitevera maitiro aripo ekuvigwa kwesainzi.
15. Kuunza zvitunha zvevanhu munyika, mvumo INOFANIRA kuwaniswa kubva kuMinistries of Health and Foreign Affairs.
ETurboNews yakaratidza kuti danho reCivil Aviation Authority (CAA) rave kuziviswa pamazano nemasayendisiti kubva kuGeneral, Health Services, uye Bazi rezvehutano rinotungamirwa naDirector Dr. Henry G. Mwebesa.
Vafambisi vekushanyira vanga vachipokana kuti Ministry of Health iri kuramba ichiyedzerwa kana vasvika, neshumiro ichisimbirira kuti ndeye kumisa kupararira kwemhando dzakasiyana dzeCOVID-19.
Pazuva rakatevera chirevo chapfuura pamusangano wevatori venhau muna Gumiguru 27 wakaitirwa paEntebbe International Airport, Gurukota rezvehutano, Jane Ruth Achieng, vakatsunga kuenderera mberi nehurongwa hwekuyedza kunyangwe zvimhingamupinyi zvavakasangana nazvo pamusangano wevatori venhau, mamaikorofoni ari kukundikana, kunaya kwemvura, uye kuwandisa, kungodudza zvishomanene.
Kusagutsikana nekumirira mushure mekuyedzwa, kwakaita kuti vamiriri vemitemo paKomiti yeParamende inoona nezvekushanyirwa vadaidze vakuru vebazi rezvekushanya kuti vapinde mubazi rezvehutano (MOH), Uganda Civil Aviation Authority (UCAA), nevamwe vane chekuita ne kuzadzikiswa kwekuyedzwa kunosungirwa pakusvika, kuzotaurirana neKomiti yeParamende yezveHutano inotungamirwa naMutevedzeri waSachigaro, Hon. Ssebikaali Yoweri, munaNovember 4, 2021, mushure mezvo vakaongorora zvivakwa paEntebbe International Airport.
Vamiriri kubva kubazi rekushanya vaive Amos Wekesa weGreat Lakes Safaris naCivy Tumisime, Sachigaro weAssociation of Uganda Tour Operators (AUTO). Wekesa yakashuma kukanzurwa kubva kune vatengi vasingade kupinda mukuyedzwa kusingakoshi uye kunonoka apo Tumusime aita chikumbiro kuvashanyi vakabaiwa majekiseni ePCR (Polymerase Chain Reaction) bvunzo maawa makumi manomwe nemaviri vasati vasvika kuti vabvumidzwe kuenda kunzvimbo dzavaienda vasina kuyedza pakusvika.
Kuti vasununguke uye kuti indasitiri yezvekushanyirwa isunungurwe zvachose, Achieng nebazi rezvehutano vakabvuma kumanikidzwa.
Hukama pakati peBazi rezvehutano nevafambisi vevashanyi hwanga husina kuwirirana kubvira apo zvikamu zvevashanyi zvakabvunza chikonzero chekuyedza uye kubhadharisa bvunzo idzi panhandare yendege chete kwete kune dzimwe nzvimbo dzekupinda. Vezvekushanya vakapomera bazi rezvehutano nekuita purofiti nekubhadharisa chikamu chekushanya. Ukuwo bazi rezvehutano rakashora vafambisi vezvikepe vachivadzinga basa nenyaya yekuvhiringa basa ravo.
Mubvunzurudzo yeterevhizheni paNTV yakatevera chirevo, Maneja weUCAA Public Affairs Vianney Lugya akabvuma kubvuma kumanikidzwa kuri kuramba kuchiitika. Iye akati: “Kubva pakati pehusiku, kubvira patakatanga kuita danho iri, vafambi vese vanobvumidzwa kuenderera mberi mushure mekunge vatora sample yavo, uye vapfuura nemaitiro ekubuda nekusvika. Takatanga neEthiopian Airlines mushure mepakati pehusiku; taivewo neRwandair yaiuya pamwe neEgypt Air. Mangwanani ano, tiri kutarisira Uganda Airlines, Kenya Airways, nedzimwe ndege dzinoverengeka, uye izororo guru kune nhandare yendege uye kugadziriro yezvifambiso zvendege.”
Nezvekunetsekana kwekuteedzera, akati vashandi vehutano panhandare yendege kusvika parizvino vaedza vafambi zviuru gumi nenomwe nemazana mana nemakumi mana nevatatu kubva kune avo makumi mana nevatatu chete.
“Paunotarisa mufananidzo mukuru maererano nezviri kuitika, vafambi vanosvika, muenzaniso unotorwa, uye ... vakamirira mhinduro kwemaawa angangoita 2 1/2. Tora muenzaniso weumwe munhu akabhururuka kubva kuUS - rwendo rwepedyo kusvika maawa makumi maviri, kusanganisira chekufambisa. Ndiko kunobva zvimwe zvichemo. Saka munhu anenge atoneta, anoiswa kumirira. Kune vakawanda vane chekuita nenyaya iyi. Tiri kushanda pamwe nekuchengetedza, mabhanga, NITA (National Information Technology Authority) nevamwe.
“Takaongorora mamiriro akaita zvinhu, uye takapa zano iri. Ini ndinogona kukupa muenzaniso weDubai kwaunotenderwa kuenda kuhotera yako mushure mekunge sampu yatorwa. Ndakaendako mavhiki mashoma apfuura, uye pandakangosvika kuhotera yangu, ndakagamuchira mhinduro.
“Takagamuchira mhinduro apo vafambi vaigunun’una pamusoro pokumirira, uye izvi zvaiodza mwoyo vamwe vafambi kufamba. Zviratidzo zvekuvandudzwa kubva zvakatanga kushanda zvakaona hurongwa hwakatsetseka nevamwe vafambisi vevashanyi, vachitaura nemamiriro ekusazivikanwa, vachiudza vatengi vavo vachitora isingasviki maminetsi makumi maviri kujekesa nemaitiro uye kuenderera.
Vashanyi vanokurudzirwa kuti bhuka online kuti utarise bvunzo pano.